Maxaa Looga Baahan Yahay Daryeelayaasha Caafimaadka Xoolaha? |
Falanqaynta TDFH (SWOT Analysis) |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, August 22, 2015
Yaa la odhan karaa waa dareyeele caafimaad?
Qof kasta ama koox kasta oo deggan tuulo, degmo iyo degaannada kale ee xoolaha lagu dhaqo, una tababaran baahiyaha aas-aasiga ah ee daawaynta xoolaha, kuwaas oo la daba taagan xoolaha daawooyin iyo tallaal joogto ah, isla markaasna si dhaw ula socda xaaladda xoolaha iyo dhicitaanka cuduradaba si la mid mulkiilayaasha xooolaha waa daryeeele caafimaad.
Daryeelayaasha caafimaadka waxa looga baahan yahay in ay gutaan waajibaadkan shaqo ee soo socda:
1. In ay buuxiiyaan baahiyaha adeeg ee loo qabo ballaadhinta adeegyada caafimaadka xoolaha ee deegaan walba.
2. In ay gaadhsiiyaan xoolo dhaqatada qaababka lagu ogaado, lagu daaweeyo, laguna kala sooco cudurada kala duwan, una bandhigaan adeegyada isku xidhka ee looga baahan yahay xoolo dhaqatada iyo hay’adaha ka masuulka ah.
3. In ay soo uruuriyaan wixii xog ah ee ku saabsan cudurada, una gudbiyaan hay’adaha ku shaqada leh.
4. In ay bulshada kala taliyaan, kana wacyi geliyaan xannuunada faafa ama kuwa si kedis ah uga dillaaca deegaan.
5. In ay ka caawiyaan xoolo-dhaqatada ka hor-tegidda cuduradda sida, tallaalka iyo buufinta cayayaanka.
6. In ay ka qayb qaataan kulamada bulshooyinka ay la deggan tihiin, kuna gudbiyaan farriimaha xambaarsan daryeelka xoolaha, ilaalinta xuquuqda xoolaha iyo ka wacyi-gelinta cuduradda faafa.
7. In la kobciyo adeegyada la xidhiidha tarminta iyo wax soo-saarka xoolaha.
8. Ilaalinta daawada, maamulidda isticmaalka daawada iyo talo siinta xoolo dhaqatada ee dhinaca daawada.
Ilaalinta caafimaadka xerada
Xerada xooluhu waa meesha ugu muhiimsan ee laga maaluli karo ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo kobcinta wax soo-saarka xoolaha, si loo helo bulsho caafimaad qabta isla markaana leh dhaqaale wax soo-saar oo ku filan. Si loo kobciyo caafimaadka xoolaha waxa muhiim ah in daryeelayaasha caafimaadku ay xerada xoolaha ka fuliyaan adeegyadan hoose:
· In lagu sameeyo xerada xoolaha tallaal joogto ah, si looga hortago cudurada faafa iyo kuwa dhakhsaha u dillaaca.
· In la isticmaalo daawooyinka gooryaan dilayaasha ah.
· In la kala saaro xoolaha caafimaadka qaba iyo kuwa jirran.
· In la daaweeyo xoolaha xanuunsanaya, si aanay ugu gudbin kuwa fayaw.
· In laga hortago is dhex galka xoolaha iyo duur-joogta, gaar ahaan wakhtiyada daaqa iyo waraabka.
· In laga hortago in loo raro xoolaha deegaan dulin leh.
· In la qorsheeyo dhul daaqsimeed ku salaysan xiliyadda kala duwan, si looga hortago meerto nololeedka gooryaanka.
· In la siiyo xoolaha daaq iyo waraab ku habboon.
· In si wanaagsan loo maamulo tarminta iyo xoolaha.
· Ugu dambaynna in laga warhayo xoolaha wakhtiga dhalmada, si looga taxadiro cuduradda gudba wakhtigaas.
Waxa jira dariiqooyin kala duwan oo loo qabto ama loo maamulo xoolaha, si loogu sameeyo daawayn, tallaal, qalliin, shaybaadh xanuun iyo baahiyaha kale ee kala duwan ee la xidhiidha xoolaha. Haddaba si looga hortago waxyeelo kaaga timaada xoolaha ama in neefka laftiisa la dhaawaco, waxa jira xirfado guud oo la isla yaqaano laguna maamulo qabashada xoolaha wakhtiyadaas. Inkasta oo ay muhiim tahay in loo eego marka hore nooca xoolaad ee la qabanayo, si loo adeegsado xirfadda ku habboon.
Guud ahaan xirfadahaasi waxa loo kala qaybiyaa dhawr qaybood.
In la adeegsado qol biro ah, oo la is dhaafiyay ka samaysan(crush), isla markaasna neefka lagu xidho, sidaasna lagu daweeyo isaga oo aan dhinacna isku dhaqaajin Karin neefku, waxaana inta badan noocan loo adeegsadaa Lo’da.
In xadhig lagu xidho neefka iyada oo loo adeegsanayo xirfado kala duwan.
Tags: Maxaa Looga Baahan Yahay Daryeelayaasha Caafimaadka Xoolaha?
Next post Baadhitaanka Bukaanka ee Caafimaadka Xoolalaha
Previous post Ummaddi Tashan Weydo Waa Loo Taliyaa!!! - Damaca Itoobiya iyo Rajada Mustaqbalkeeda!